ညီလင်းသစ်: ပက်ဖြန်းလှည့်တော့ ဒီဇင်ဘာ
Posted by ညီလင်းသစ် au 3.12.12
ဒီဇင်ဘာကိုတော့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်တယ်၊၊ Sweet December ညတွေကို ခေါပုတ်မီးကင်စားပြီး ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ ငယ်ဘဝတွေကို လွမ်းတယ်၊၊ သတင်းတွေမြင်ရဖတ်ရတာတော့ အတူတူပါပဲ အကိုရေ၊၊ မျက်ရည်လည်မိတယ်၊၊
I saw some Padauk is blooming in November. Everything can't imagine. but I hope this December will SWEET DECEMBER.
စကားလုံးတွေ မဲ့လိုပါပဲ အစ်ကိုရေ ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိ ။
သောကနဲ့အတူ ဒုက္ခဝေဒနာ ခံစားခဲ့ရတဲ့ ခံစားနေရတဲ့ လူသားအားလုံးနဲ့ သံဃာတော်အပေါင်း နိဗ္ဗာန်မရောက်မှီ သံသရာအဆက်ဆက်မှာ အခုလို ဘဝဆိုးမျိုးနဲ့ ကင်းဝေးပြီး အတိတ်ဝဋ်ကြွေးများရှိခဲ့ရင်လည်း ကြေပါစေလို့ ဆုတောင်းမြဲဆုတောင်းလျှက်ပါ မောင်ညီလင်းရေ။
ဆေးပေါင်းခတဲ့ည လို့ မျက်နှာစာအုပ်မှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရေး၊ သီချင်းတွေ နားထောင်ပြီးခါမှ မနက်ရောက်တော့ မြင်ရ၊ ကြားရတဲ့သတင်းတွေကြောင့် လူက ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်း မသိဘူး။ ဒါကြောင့် ရေးနေကျ Sweet December လို့တောင် မရေးဖြစ်ဘူး။ Just want it to be Sweet December လို့ပဲ ရေးလိုက်တယ်။
စိတ်ထဲမှာ အေးချမ်းချိုမြိန်လှတဲ့ ဒီဇင်ဘာကို အပြည့်အ၀ မခံစားနိုင်တော့တာ အမှန်ပဲ။
သတင်းတွေ မကြည့်ရက်လျှက် မြင်နေခဲ့ရတယ်
like လည်း မလုပ်ရက်၊ ကွန်မန့်လည်း မပေးချင်နဲ့
“မီးပျက်တဲ့ တိုင်းပြည်မှာ နေလာကြသူတွေပီပီ လက်ပေါ်ကို ဖယောင်းစက်ကလေး တစ်စက်ကျရင်တောင်၊ လက်ကို ဖယောင်းတိုင်မီးတောက်လေး ဟပ်ရင်တောင် ဘယ်လောက်ပူတယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့အားလုံး သိပါတယ်”
ဆိုတဲ့ စာသားကို အပြန်ပြန်အလှန်လှန်ဖတ်ရင်း.......
ဒီဇင်ဘာဟာ...အေးချမ်းသောဒီဇင်ဘာ ဖြစ်နိုင်ပါစေ။ ။
ဒီနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာ ကိုယ့်ရပ်ကိုယ့်မြေရောက်နေပေမဲ့ ဒီဇင်ဘာကို ရင်မခုန်မိတော့ဘူး ကိုညီလင်းရေ ... ။
ရင်ခုန်ရမယ့်အစား ရင်တွေနာလို့ .... :(
ကိုညီရေ........ခုတလော......တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုး မရိုးနိုင်အောင် မြင်ရ ကြားရမှုတွေမှာ.......ရင်မော နှောက်ကျိစွာနဲ့တမ်းတနေမိတဲ့စကားလုံးတွေဟာ.......လူ လူချင်း စာနာမှု...။။ ကိုယ်ချင်းစာတရား...။။။.ဥာဏ်ပညာ....။။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ....။။ စသည်ဖြင့်သော စကားလုံးတွေပဲဖြစ်တယ်....။။ သက်ပြင်းမောကြီးတွေ ချရင်း ငြိမ်းအေးသော ဒီဇင်ဘာဖြစ်နိုင်ပါစေကြောင်း ခပ်တိုးတိုး ဆုတောင်းသွားပါတယ်.....။။
တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ပါပဲအကိုရာ...၊ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတက်လာတိုင်း
တစ်ချက်ကြည့်ပြီးတာနဲ့ Hide လုပ်ပစ်လိုက်ရတယ်....၊
နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမြင်နိုင်တဲ့ အင်အားတွေ မရှိတော့လို့။
ဆွံ့အလို့နေမိတယ်.....မကြည့်ရက် မကြည့်ရဲ...မမြင်ရက် ..မမြင်ရဲ...ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးတွေ တကယ်ရှိခဲ့တာလား.....မယုံနိုင်အောင်ပါဗျာ...
ဟုတ်ပါတယ်။ မျှော်လင့်မထားတဲ့ဖြေရှင်းပုံ၊ ဖြေရှင်းနည်းကြောင့် အံ့သြထိတ်လန့်နာကျင်စွာ ခံစားရပါတယ်။ အန်တီတင့်ဆုတောင်းသလို ဆုတောင်းရင်း အေးချမ်းတဲ့မေတ္တာနှင်းမှုန်တွေ ပက်ဖျန်းလိုက်ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ ငြိမ်းအတွက် မွေးနေ့ လက်ဆောင်လို့မယူပါရစေနဲ့။
တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ် ... ထူးမခြားနား ဇာတ်လမ်းတွေကို ကပြနေတဲ့ အစိုးရမင်း တွေ စရိုက်မှန်တွေ ပေါ်လွင်သွားတာပေါ့ ..
တနေ့တနေ့ fb ကြည့်ပြီး ဘယ်လိုမှ မခံစားနိုင်တောဘူး
အတိတ်က အရိပ်တွေ ခဏခဏညှည့်ကြည့်မနေပါနဲ့တော့ရှင်
သက်ပြင်းပဲ ချသွားပါတယ် ကိုညီလင်းသစ်ရေ......။ တစ်ခါတစ်လေ FB ကို မဖွင့်ချင်လောက်အောင်ကို သတင်းတွေက ထိတ်လန့်စေခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေကို ရှောင်ပြေးလို့မရ၊ ဘယ်နေရာမှာပဲ ရောက်နေနေ ကိုယ့်နိုင်ငံအရေးမို့ မသိချင်ယောင်မဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အားလုံးအေးချမ်းစေချင်ပါတယ်ဗျာ။
ဒီနှစ်ရဲ့ ဒီဇင်ဘာကတော့ ..ရင်နာစရာတွေနဲ့ ပါပဲ အကိုရေ....
ခေါပုတ်ကင်နဲ့ Sweet december...၊ အတော့်ကို လိုက်ဖက်မှာ သေချာတယ်..၊း)
Padauk in November...? Wow.. very unusual, isn't it?
ပြောခဲ့ပေါင်းလည်း များခဲ့ပြီကိုး ညီရဲ့.....၊း(
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ၊ အဲဒီလိုပဲ ဆုတောင်းရတော့ မှာပါပဲ...၊
ဟုတ်ပါရဲ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ကလေး sweet ဖြစ်ဖို့တောင်မှ ရဲရဲကြီး မမျှော်လင့်နိုင် တော့တဲ့ ခေတ်ပါပဲ ဇွန်ရေ...၊
အေးဗျာ၊ ကျနော်တို့အားလုံး သိခဲ့ကြဖူးတဲ့ အေးအေးချမ်းချမ်း ဒီဇင်ဘာကိုပဲ တမ်းတနေမိတော့တယ် ညီမရေ..၊
မမေ အဖြစ်ကလည်း ဒီဇင်ဘာတိုင်းမှာ အဝေးကနေ အိမ်ကိုလွမ်းခဲ့ရသလောက် အခုအိမ်မှာ နေခွင့်ရတဲ့ ဒီဇင်ဘာကျတော့မှပဲ.... ဟူး.....၊း(
အဲဒီ စကားလုံးတွေက အခုမျက်မှောက် ကာလရဲ့ Key words တွေပါပဲ ညီမရေ..၊
အမှန်ပဲ ကိုညိမ်းရာ၊ ပုံတစ်ပုံ မြင်ပြီးတိုင်း လူမှာ အားအင်တွေ ကုန်ခမ်းသွားသလိုကို ခံစားနေရတာဗျ...၊
မယုံနိုင်စရာ ကောင်းတာတော့ အမှန်ပါပဲဗျာ...၊
အမြန်ဆုံး အေးချမ်းပါစေလို့ပဲ ကျနော်တို့ ဆုတောင်းရတော့ မှာပါပဲ...၊
ဟုတ်ပဗျာ..၊ ဇတ်လမ်းက နှစ်ပါးသွားမှာ ကြည်နူးမယ် ကြံကာရှိသေး ဘီလူးဆိုင်းသံက ကြားလာရပြီ...၊
Action speaks louder than words ဆိုတဲ့ စကားပုံလေးကို သတိရတယ်..၊
အင်း... အဲဒိအတိတ်က သုံးရက်လောက်ပဲ ကြာသေးတော့လည်း စိတ်မကောင်းစရာ တွေက ကျန်နေသေးတာပေါ့ ညီမရယ်..၊ ဆုတောင်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါနော်..၊
အေးဗျာ... အဖြစ်က မနှစ်ကနဲ့ မတူတာတော့ အမှန်ပဲ၊
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ၊ စိတ်မချမ်းမြေ့စရာတွေ ဆိုပေမယ့်လည်း နိုင်ငံအရေးဆိုတော့ ကျနော်တို့လည်း မျက်နှာလွဲ ခဲပစ် ဘယ်လုပ်နိုင်ပါ့မလဲလေ...၊
အေးလေဗျာ... ဒီဇင်ဘာမှာ အေးချမ်းနေရမယ့် အစား....။း(
ဒီဇင်ဘာရဲ့အပူက ပြည်သူလူထုတွေအတွက် စိတ်မချမ်းမြေ့စရာပါ ကိုညီလင်းသစ်ရေ..
ဆရာမ ဆီမှာ ဖတ်မိတာ :)
ထပ်တူထပ်မျှ ခံစားရပါတယ် ကိုညီလင်းသစ်ရေ..
ဒီဇင်ဘာလည်း ရင်ထဲမှာ မအေးချမ်းနိုင်ပါဘူး
ရောင်နီလေး သန်းလာပြီလို့ မျှော်မှန်းပြီး ပျော်ရုံရှိသေး.
အပျော်တွေ ရိုက်ချိုးခံလိုက်ရသလို ခံစားလိုက်ရတယ်... ”
ပုံတွေမြင်ရတာ...သတင်းတွေဖတ်ရတာ ရင်ထဲမှာတကယ်မချိပါဘူး.... ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိအောင်ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်...